ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် မန္တလေးမြို့ သင်္ဂဇာချောင်းအတွင်း အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ကာ ငါး ပိဿာချိန?? - Yangon Media Group
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၃၅ လမ်း မှ ၄၁ လမ်းအထိ သင်္ဂဇာချောင်းတစ်လျှောက်တွင် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် ည ၁၁ နာရီ ကျော်ခန့်က ငါးများအစုလိုက်အပြုံလိုက်သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီထံမှသိရသည်။
”အခုငါးသေတဲ့ကိစ္စက စွန့်ပစ်ရေကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်တာ။ နေရောင်ခြည်အလုံအလောက် မရတဲ့အတွက် သင်္ဂဇာချောင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ ရေညှိတွေကသေကုန်တဲ့အတွက် နိုက်ထရိုဂျင်အမိုးနီးယားဂက်စ်တွေထွက်တယ်။ အဲဒါတွေ ကြောင့် ငါးတွေလည်း အောက်ဆီဂျင်အလုံအလောက်မရလို့ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီး သေကုန်တာပါ။ အခုစမ်းသပ်ချက်အရ ရေထဲမှာရှိတဲ့ အောက်ဆီဂျင် Level က ဘယ်လောက်အထိကျသွားလဲဆိုရင် Level -1 မီလီဂရမ်/လီတာအောက်ကို လျော့သွားတဲ့အတွက် ရုတ်တရက် ငါးတွေသေဆုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာနမှ ဌာနစုမှူး ဦးခင်မောင်သင်းက ပြောကြားသည်။
ရေနှင့်ရေသန့်ရှင်းမှုဌာနအနေဖြင့် စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက သင်္ဂဇာချောင်းအတွင်းရှိ ရေအားတိုင်းတာချက်အရ အောက်ဆီဂျင် Level-0.8 & 0.6 မီလီဂရမ်/ လီတာသာရှိနေပြီး ယခု အခါ ရေစီးဆင်းမှုမရှိသော နေရာများတွင်လည်း ရေစီးဆင်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေသည်။ သင်္ဂဇာချောင်းအတွင်း သေဆုံးခဲ့သည့် ငါးအရေအတွက်မှာ ပိဿာချိန် ၅ဝ နီးပါးရှိပြီး သန့်ရှင်းမှုဌာနမှ ဝန်ထမ်းများက နံနက် ၆ နာရီမှစတင်၍ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ နံနက် ၁ဝ နာ ရီတွင်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး ဆယ်ယူရရှိသော ငါးသေများအား အေးရိပ်ငြိမ် သုသာန်သို့ပို့ဆောင်၍ မြေမြှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဒုတိယတစ်ကိုယ်တော်ခွေထွက် ပြီးတာနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်မှာပါ ~ရွှေထူး
သီတင်းကျွတ် ကာလအတွင်း မန္တလေးတောင် တော်ပေါ်၌ ဗြောက်အိုးနှင့် မီးရှူး၊ မီးပန်း မဖောက်ရန် ဝင်ထ?
မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်း လဲလှယ်ဖြတ်ဆက်ထားသောယာဉ်များကို သိမ်းဆည်းခြင်းအစား RTA တံဆိပ်ရိုက?